Thola Izitifiketi Zakho Zokuthweswa Iziqu Namuhla »IHodges University - Admissions
Categories: Izitifiketi Zokuthweswa Iziqu, Amaqiniso Nje
Khetha Uhlelo Lwakho Lwesitifiketi Esithweswe Iziqu
Isitifiketi seCybersecurity Graduate
Isitifiketi seCybersecurity isitifiketi sehora lesikweletu eli-18 esingaqedwa ngamasemester amabili. Ihlanganisa izihloko zohlelo lokwaziswa okubanzi njenge Ukuphathwa Kwamasu we-IT Systems kanye ne-IT Trends ngezihloko ezigxile ekuphepheni njenge Ukuthotshelwa Kwezokuphepha, Isiqinisekiso Sokuphepha kwe-IT, kanye ne-Advanced Forensics. Lesi sitifiketi senzelwe labo abafisa ukwenza ngokukhethekile ukuphepha kwe-cyber okuthuthukile emsebenzini wabo. Ngokwengeziwe, lesi sitifiketi singalungiselela labo abafuna ukufundisa ukuphepha kwe-cyber ezingeni lasekolishi. Kunezidingo zokufaneleka zalolu hlelo, kufaka phakathi iziqu ze-bachelor's.
Isitifiketi Sokuphathwa Kwemininingwane
Isitifiketi Sokuphathwa KweDatabase sihlanganisa izihloko zezinhlelo zolwazi ezibanzi njenge Amathrendi Wokuphathwa Kwe-IT Nokulawulwa Kwamasu ngezihloko ezigxile ekuphathweni kwedatha njenge Ama-Data Warehouse kanye ne-Decision Support Systems kanye ne-Database Security kanye ne-Auditing. Lolu hlelo luzokusiza ukuthi uthuthuke ngaphakathi kwensimu yakho yamanje noma ukukulungiselela kangcono ushintsho lomsebenzi futhi ungaqedwa ngamasemester amabili. Kunezidingo zokufaneleka zalolu hlelo, kufaka phakathi iziqu ze-bachelor's.
Isitifiketi Sobuholi Bokwehluka, Ukulingana kanye Nokufakwa
Ukwehluka, Ukulingana kanye nobuholi bokufakwa
Isitifiketi sokuthweswa iziqu sobuholi beDiversity, Equity and Inclusion senzelwe labo abafisa ukufunda ukuthi bangaziguqula kanjani izindawo zokusebenza ngokukhuthaza ukwehluka kanye nokukhuthaza ukubandakanywa. Lolu hlelo lwenzelwe abaphathi nabasebenzi abasezingeni eliphezulu futhi lungathathwa lodwa noma ngokuhambisana neziqu ze-master. Kunezidingo zokufaneleka zalolu hlelo, kufaka phakathi iziqu ze-bachelor's.